Guudmarka Palmitoylethanolamide (PEA) Waxaa jira warbixino sheegaya in Maamulka Cuntada iyo Dawada ay ogolaadeen inay soo gudbiyaan codsi tijaabo caafimaad si loogu daaweeyo COVID-19 iyadoo la adeegsanayo dawo dabiici ah oo u ekaysiinaysa ficil uu meekulku ka helay marijuana. Daawada synthetic, oo loo yaqaan 'ultramronizedzed palmitoylethanolamide' (micro PEA), ayaa la rumeysan yahay inay u dhaqmeyso sidii anti-bararka. Palmitoylethanolamide (PEA) waa “dabiici ahaan ...
Miyaad ka dhimatay gabowga? Hagaag, daroogada gabowga ayaa shaki la’aan ah xulashada ugu kalsoonida badan ee dib u noqoshada saacadaada bayooloji. U fiirso dhinacyada muhiimka ah ee Nicotinamide Mononucleotide (NMN), doorka ay ku leedahay da'da, iyo sida loo helo daaweynta. Phcoker waa soo saare xirfadle ah si loo soo saaro budada Nicotinamide mononucleotide (NMN) Si dhakhso leh u dir su'aal: Nala soo xiriir annaga Hordhac Koraaya o ...
Maxaan ugu baahanahay Magnesium? Kahor intaanan guda galin Magnesium L-Threonate nootropic supplement, waxaa laga yaabaa inaad u baahato inaad wax ka fahamto furaheeda ka horreeyay. Magnesium waa nafaqeeye muhiim ah, oo si firfircoon ugu lug leh dhowr geeddi socod oo jirka ah. Cunsurku wuxuu hayaa foosha murqaha iyo nasashada, isku-darka borotiinka, iyo howlaha neerfaha. Ka sokow, waxay xakameysaa sonkorta dhiigga waxayna ilaalisaa saxaafadda dhiigga ...
Guudmarka guud ee galantamine Hydrobromide Galantamine hydrobromide waa dawo dhakhtar qoro oo loo isticmaalo in lagu daaweeyo waallida cudurka Alzheimers. Galantamine waxaa markii hore laga soosaaray warshadda barafka wadata ee Galantus spp. Kordhinta galantamine si kastaba ha noqotee waa alkaloid jaamacadeed oo kiimiko ahaan loo soo saaray. In kasta oo sababaha cudurka Alzheimers aan si fiican loo fahmin, hadana waxaa la ogyahay in dadka la ildaran cudurka Alzheimers ee h ...
Dulmarka PRL-8-53 Buugga buugaagta ee PRL-8-53 oo ah maandooriye maskaxeed ayaa dib loo raacayaa horaantii 1970s. Nikolaus Hansl, oo ah borofisar ka tirsan Jaamacadda Creighton, ayaa si kadis ah u helay nootropic-ka isagoo ka shaqeynaya esters aminoethyl meta benzoic acid. Tan iyo markii la aasaasay, kaabiskani wuxuu soo maray hal daraasad oo qadiim ah iyo tijaabo aadanaha. Cilmi-baarista caafimaad waxay ahayd caddeynta ugu dambeysa ee PRL-8-53 ee barashada ...
Dulmarka guud ee Cycloastragenol Cycloastragenol (CAG) oo sidoo kale loo yaqaan T-65 waa tetracyclic triterpenoid dabiici ah oo laga helo dhirta Astragalus membranaceus. Waxaa markii ugu horaysay la ogaaday markii laga soosaaray Astragalus membranaceus waxaa lagu qiimaynayay maaddooyinkeeda firfircoon ee leh anti-gabowga guryaha. Cycloastragenol sidoo kale waxaa laga soo qaadan karaa Astragaloside IV iyada oo loo marayo tallaabada hydrolysis. Astragaloside IV ayaa ah galka ugu weyn ee firfircoon ...
Nicotinamide riboside (NR) iyo nicotinamide riboside (Chloride) 1.Waa maxay Nicotinamide Riboside (NR)? NR waa nooc ka mid ah fiitamiin B3 ama niacin. Xarunta waxaa la ogaadey 1940s inay tahay cunsur koritaanka H. influenza. Bilowga qarniga 21aad, daraasado badan ayaa caddaynaya in NR ay tahay horudhaca NAD +. Waxaan ...
Waa maxay Oxiracetam? Oxiracetam waa mid ka mid ah waxyaalihii hore ee nootropic ee laga heli jiray qoyska cunsuriyada. Waxay ahayd xarunta saddexaad ee cunsuriyada ka dib piracetam iyo aniracetam waxaana markii ugu horeysay la soo saaray 1970s. Oxiracetam waa nooc ka dhasha kiimikada asalka racetam, piracetam. Sida cunsuriyadaha kale, oxiracetam waxay ka koobantahay pyrrolidone oo xudunta u ah. Si kastaba ha noqotee, oxiracetam waxay leedahay koox hydroxyl ah, waana sababta ay u xoog badan tahay ...
Waa maxay 9-ME-BC? 9-Me-BC (9-Methyl-β-karboline) oo sidoo kale loo yaqaan 9-MBC waa sheeko nootropic cusub oo ka socota kooxda from-karbolineline. Β-Carbolines-ka waxay ka soo jeedaan qoyska karboline-ka kaladuwan. Tan macnaheedu waa in lagu soo saaro labadaba shucuur ahaan jirka bini'aadamka iyo sidoo kale si heer sare ah miraha qaar, hilib la kariyey, qiiqa tubaakada iyo kafee. The β-Carbolines (BCs) waxaa loo aqoonsaday inay yihiin neurotoxic, si kastaba ha noqotee, waxay ahayd dhowaan di ...